Fahasamihafana eo amin'ny valisoa sy ny fandrisihana | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny valisoa sy ny fandrisihana | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Business / Management / Human Resources / Fahasamihafana eo amin'ny valisoa sy ny fandrisihana
Fahasamihafana eo amin'ny valisoa sy ny fandrisihana
4 Jolay 2014 Narotsak'i Admin
Valisoa vs fanentanana
Ny valisoa sy ny fandrisihana dia teknikan'ny fitantanana ny mpiasa ampiasain'ny mpampiasa hitantanana ny asany amin'ny fomba mahomby. Ny valisoa sy ny fandrisihana dia ampiasaina ao amin'ny toeram-piasana mba hanentanana, hanatsara ny fitondran-tena, hampitombo ny vokatra ary hampirisihana ny mpiasa hanome ny kalitaon'ny asa tsara indrindra vitany. Ny valisoa sy ny fanentanana dia mahasoa ny mpampiasa sy ny mpiasa satria manamora ny famoronana tontolon'ny asa tsara. Na izany aza, misy fahasamihafana maromaro eo amin'ny fomba fampiasana ny rafitra tsirairay ho an'io tanjona io. Manolotra topy maso mazava momba ny tsirairay ny lahatsoratra ary manazava ny fitoviana sy ny tsy fitovian'ny valisoa sy ny fandrisihana.
Inona no atao hoe valisoa?
Ny valisoa dia tombony azo omena amin'ny fanekena ny zava-bita, ny serivisy, ny fitondran-tena mendri-piderana, sns. Ny valisoa iray dia omena ny mpiasa iray rehefa avy nanome porofo momba ny toetra tsara sy ny zava-bita tsara izy. Ny tanjon'ny valisoa dia ny hampisehoana amin'ireo mpiasa fa omena lanja ny asan'izy ireo sy ny ezaka ataon'izy ireo, ary omena ho fankasitrahana ny asa efa vita, ary koa antony manosika hanatsara ny kalitaon'ny asany. Ny valisoa dia mety amin'ny endrika vola na mety ho toetra tsy ara-bola mihitsy aza. Ny valim-bola dia mety amin'ny endrika fampisondrotana karama, bonus sns. Ohatra amin'ny valisoa tsy vola dia misy ny fampiroboroboana, ny fotoana karamaina, ny ora fiasana miovaova sns.
Inona no atao hoe Insentif?
Ny fandrisihana dia tombony azo ampanantenaina ny mpiasa hanentana azy ireo hahatratra ny tsara indrindra ary hanatsara ny fitondran-tenany, ny vokatra ary ny vokatra avoakany hatrany. Omena famporisihana ireo mpiasa manao fampisehoana ambanin'ny par, ary hampirisika azy ireo hahatratra ny haavon'ny fanatanterahana na tanjona kendrena. Ohatra iray amin'ny fanentanana ny: "manome valisoa fanomezana 200 $ ho an'ny mpiasa iray nahatratra 30% ny vidin'ny varotra ho an'ny iray volana." Ohatra amin'ny fandrisihana hafa ny komisiona fivarotana, ny safidin'ny tahiry ho an'ny mpiasa, ny birao tsara kokoa sy ny toeram-piasana, ny tambin-karama ambonimbony, sns.
Inona no maha samy hafa ny Insentif sy valisoa?
Na eo aza ny fitovizany amin'ny fanentanana sy famporisihana ny mpiasa hahatratra ny haavon'ny asa tsara kokoa, misy fahasamihafana maromaro eo amin'izy roa. Ny fahasamihafana lehibe dia mitoetra amin'ny fizotran'ny fotoana anolorana ny tsirairay. Omena valisoa rehefa vita ny asa ary aorian'ny manaporofo ny maha-mendrika azy ny mpiasa. Atolotra mialoha ny fanentanana ary natao hanatsarana ny fahombiazan'ny mpiasa izay tsy mahafeno fenitra antenaina na tanjona kendrena.
Na dia tombony azo aza ny mpiasa izay mahavita tsara ankehitriny, dia omena aingam-panahy ireo mpiasa izay tsy mahavita ny asany. Ny famporisihana dia famporisihana hanao tsara kokoa ary raha vantany vao tratry ny mpiasa ny tanjona antenaina dia lasa valisoa izay ahazoan'ny mpiasa ilay tombom-barotra nampanantenainy. Misy tombony lehibe maromaro amin'ny valisoa sy ny fandrisihana. Raha ny momba ny mpiasa dia mitombo ny toe-tsaina, ny antony manosika ary ny fahafaham-po amin'ny asa, ka miteraka tontolon'ny asa tsara. Ny mpampiasa, etsy ankilany, dia afaka mahazo tombony amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny famokarana, izay mety handika ho amin'ny tombony avo kokoa.
Valisoa vs. fanentanana
• Ny valisoa sy ny fandrisihana dia teknikan'ny fitantanana ny mpiasa izay ampiasain'ny mpampiasa hitantanana ny asany amin'ny fomba mahomby.
• Ny valisoa sy ny fandrisihana dia ampiasaina ao amin'ny toeram-piasana mba hisarika ny saina, hanatsara ny toe-tsaina, hampitombo ny vokatra ary hampirisika ny mpiasa hanome ny kalitaon'ny asa tsara indrindra vitany.
• Ny valisoa dia tombony azo omena amin'ny fanekena ny zava-bita, serivisy, fitondran-tena mendri-piderana, sns.
• Ny mpiasa dia omena valisoa raha tsy rehefa avy nanaporofo ny toetra tsara sy ny zava-bita tsara izy.
• Ny fandrisihana dia tombony azo ampanantenaina ny mpiasa hanentana azy ireo hahatratra ny tsara indrindra ary hanatsara ny fitondran-tenany, ny vokatra ary ny vokatra hatrany.
• Omena insentif ireo mpiasa manao fampisehoana ambanin'ny par, ary hampirisika azy ireo hahatratra ny haavon'ny asa na tanjona kendrena.
• Ny fahasamihafana lehibe dia mitoetra amin'ny fizotran'ny fotoana anolorana ny tsirairay. Omena valisoa rehefa vita ny asa ary aorian'ny manaporofo ny maha-sarobidy azy ny mpiasa. Atolotra mialoha ny fanentanana ary natao hanatsarana ny fahombiazan'ny mpiasa izay tsy mahafeno fenitra antenaina na tanjona kendrena.
Fahasamihafana eo amin'ny karama sy ny karama Fahasamihafana eo amin'ny karama sy ny karama Fahasamihafana eo amin'ny maso ivoho mpiasa sy ny masoivoho mpikarakara mpanatanteraka Fahasamihafana eo amin'ny ankehitriny sy ny fanomezana Fahasamihafana eo amin'ny karama sy ny karama
Filed Under: Human Resources Tagged With: Fanentanana , fandrisihana , valisoa , valisoa , valisoa ary famporisihana
Momba ny mpanoratra: Admin
Avy amin'ny sehatra Engineering cum Human Development Development, manana traikefa 10 taona mahery amin'ny developmet sy ny fitantanana atiny.
Fahasamihafana eo amin'ny Dopamine sy Endorphins
Fahasamihafana eo amin'ny fananana ankehitriny sy tsy misy
Fahasamihafana eo amin'ny Troponin I sy ny Troponin T
Fahasamihafana eo amin'ny Pads sy ny Tampons
Fahasamihafana eo amin'ny distilation sy conduction